दोधारमा ओली सरकार, प्रहरीले गौर नरसंहारको फाईल खोले दुई तिहाई गुम्ने खतरा - Samajbad
काठमाडौं : कार्तिक २०, पछिल्लो समय धमाधम ‘पावरफुल’ व्यक्तिहरु पक्राउ पर्न थालेपछि रौतहट नरसंहारमा मुख्य भूमिका खेलेका अहिले सरकारका स्वास्थ्य तथा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव चिन्तित बनेका छन् । प्रहरीले विगतका राजनीतिक आवरणमा छोपिएका अपराध खोल्न थालेपछि उपेन्द्र यादव चिन्तित बनेका हुन् । को छ । कांग्रेस सांसद आलमदेखि देखि सभामुख कृष्णबहादुर महरासम्म प्रहरी फन्दामा परिसकेका छन् । रौतहटको १२ बर्षअघिको घटनामा कांग्रेस सांसद मोहम्मद अफ्ताव आलम पक्राउ परेपछि रौतहटकै अन्य पुराना घटनाको अनुसन्धानको दबाब प्रहरीमाथि परेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवविरुद्धको जाहेरी जिल्ला अदालत रौतहटमै १३ वर्षदेखि विचाराधीन छ । वि. स. २०६३ चैत्र ७ गते रौतहटको सदरमुकाम गौरमा उपेन्द्र यादवको पार्टीका कार्यकर्ताले नरसंहार मच्चाएका थिए । जसमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको विभत्स हत्या भएको थियो । माओवादी कार्यकर्ताहरुलाई लखेटी लखटी बिभत्स ढंगले हत्या भएको थियो । त्यो घटनामा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका नेता यादबविरुद्ध मृतकका परिवारले उजुरी दिएका थिए । तर, अहिलेसम्म सो घटनाको अनुसन्धान प्रहरीले गरेको छैन । तर केही दिन अघि विराटनगरमा पत्रकारहरुसँग बोल्दै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले गौर नरसंहारको पनि सरकारले छानबिन गर्ने बतएका थिए ।
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको अभिव्यक्ति पछि भने ओली नेतृत्वको दुई तिहाईको सरकारभित्र भूकम्प आएको छ । सरकारले विगतका राजनीतिक आधारमा लुकाईएका घटनाहरु छानबीन गर्न थालेपछि त्यसको धक्का उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी भित्र परेको छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीको गरेर ओली नेतृत्वको सरकारको दुई तिहाई मत पुगेको थियो । तर गौर नरसंहारको छानबिन गर्ने पहरीले तयारी गरेसँगै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी भने सरकारबाट बाहिरिने तयारी गरेको छ । समाजवादी पार्टी भित्र सरकारबाट बाहिरिने बिषयमा छलफल भईसकेको छ ।
संविधानको संशोधनको बिषयलाई लिएर भन्दा पनि गौर हत्याकाण्डको छानबिन रोक्नका लागि समाजवादी पार्टीले सरकार छाड्ने चेतावनी दिन थालेको सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुले बताउन थालेका छन् । सरकारमाथि भने दोहोरो दबाब परेको छ । गौर हत्याकाण्डको छानबिन गरेर उपेन्द्र यादवलाई पनि कानुनी लायरामा ल्याउन सरकारलाई चौतर्फि दबाब बढेको छ भने अर्कातर्फ गौर नरसंहारको फाईल खोले दुई तिहाई गुम्ने डर रहेको छ ।